Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Ma jiro Halyeey ka hadhay Maalinta Dalxiiska Adduunka ee 2021
Dalxiis La Heli Karo • Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Awards • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Education • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • ICTP • Wareysiyo • News • Dadka • Ogeysiisyada Saxaafadda • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wtn
Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay jirtaa 18 bilood oo keliya, laakiin hoggaamiyeyaal cusub ayaa ka soo baxaya warshadaha socdaalka iyo dalxiiska adduunka.
Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa Shabakadda Dalxiiska Adduunka u aqoonsatay geesiyaal dalxiis oo dhab ah - laakiin waa ayo?
The Shabakada Dalxiiska Adduunka (WTN) waxay xubno ku leedahay 128 dal waxayna ka soo baxday dib u dhiska.rajo dood.Heroes.travel waa barnaamijka abaalmarinta iyo aqoonsiga bilaashka ah ee WTN ay ku maamuusto kuwa isbedelka sameeyay.
Sida laga soo xigtay UNWTO, Maalinta Dalxiiska Adduunka ee 2021 waxay ku saabsan tahay dhexgalka dalxiiska. WTN waxay xaqiijineysaa in tan ay ku jiraan dhammaan geesiyaashaas oo aan lahayn magacyo.
Geesiyaasha dhabta ahi waa kuwa aan wax ganacsi ah lahayn intii uu socday masiibada oo wali aaminsan warshadaha safarka iyo dalxiiska. Kooxdan aan la aqoon ayaa lagu abaalmariyay Abaalmarinta Halyeeyga Dalxiiska Anonomyous. by Shabakadda Dalxiiska Adduunka maanta.
”Halyeeyadii dhabta ahaa ee qalbigayga ku jiray oo bilaa shaqo ah 18 bilood wayna badbaadeen.
Si kastaba ha ahaatee waxay yihiin kuwo aan la arki karin - way nagu dhex jiraan, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan cod lahayn. Waxaan rabaa inay na maqlaan, soo baxaan, si aan ugu bogaadinno inay badbaadaan oo ay sii noolaadaan, oo ay qayb ka noqdaan warshadeena weyn. Maalinta Dalxiiska Adduunka ee 2021 waxay ku saabsanayd is -dhexgal, waana in kooxdan lagu daraa. ” ayay tiri Marikar Donato, oo ah isku dubaridka munaasabadda Maalinta Dalxiiska Adduunka ee WTN iyo halyeey dalxiis lafteeda.
Waxay raacisay: "Waxaa jira kumanaan geesiyaal dalxiis oo aan la aqoon."
Aasaasaha iyo Guddoomiyaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa intaas ku daray: Aad ayaan ugu faraxsanahay Marikar in aan la imaado Abaalmarinta Halyeeyga Dalxiiska ee Anonomyous, oo ah kan ugu horreeya adduunkan.
Waa degdeg, waxaan aqoonsannahay geesiyaashaan aan la aqoon. Ther waa meel walba.
Mararka qaar waxaan ogaanaa cidda ay yihiin geesiyaashaasi. Waxaan haysanay xaalado dadku aysan rabin in lagu magacaabo geesiyaal. Waxay dareemeen wax aan loo baahnayn in lala wadaago dadweynaha.
Waan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo, the Shabakada Dalxiiska Adduunka waa ururkii ugu horreeyay ee dalxiis caalami ah oo garwaaqsada baahida loo qabo in halyeeyadan aan la aqoon safka hore la geliyo.
The abaalmarinta geesiga dalxiiska oo aan la garanayn ayaa si rasmi ah loogu daray geesiyaal.fasax boortofooliyada.
Aasaasaha WTN Dr. Peter Tarlow ayaa qiray oo yiri:
“Dalxiisku wuxuu ka kooban yahay kumaan kun oo qof oo si aan daneyneyn u abuuraya xiriiro u dhexeeya shaqsiyaadka, dhaqamada iyo quruumaha.
Xiddigahan dalxiiska ah ayaa ah geesiyaasha warshadaha ee aan iftiimin ee u keena duni mugdiga ku habsatay.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay doonaysaa inay iftiimiso geesiyaashaas dalxiiska. Sida Dr. Peter Tarlow, oo ay wada heleen Shabakadda Dalxiiska Adduunka uu yiri: “Dalxiisku waa wax ka badan warshado kaliya, waa isku-darka wax-qabadka iyo ruuxa, is-dhexgalka nafaha iyo xaqiiqadan dunidan.
Geesiyaasha dalxiisku waa kuwa mideeya anshaxa wax -ku -oolka ah isla markaana isku daraan dadnimadeenna iyo adduunka socdaalka ”Tarlow wuxuu na xusuusinayaa in geesiyaasha dalxiisku ay matalaan kuwa ugu fiican dhammaanteen waxna ka baranno mid walba waa safar qotodheer u leh hal -abuurka iyo daryeelka. ”
Marikar Donato waa Tusaha Dalxiiska ee Washington DC waana fuliyaha adduunka Xiriirka Ururka Hagaha Dalxiiska (WFTGA)
Maanta Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa sidoo kale u dabbaaldegtay geesiyaalkeedii la yaqaannay. Halyeey kasta oo ay aqoonsatay WTN wuxuu sameeyay wax ka baxsan waxa laga filan karo inuu dhex maro cudurka COVID-19.
Dr. Taleb Rifai, Xoghayihii hore ee UNWTO oo muddo laba jeer ah soo dhaweeyey geesiyaal ka yimid gurigiisa Urdun. Geesiga Dalxiiska Mary Rhodes, madaxweynaha Guam Hotel & Restaurant Association wuxuu kacay 4tii subaxnimo si uu uga soo qaybgalo dhacdadan caalamiga ah ee zoom oo geesiyaal qaarad walba leh.
Dr. Walter Mzembi, Wasiirkii hore ee Dalxiiska oo ka yimid Zimbabwe ayaa ka digay in dunidan ay xiran tahay, iyo awaamiir hal dhinac ah ayaa burburinaya hoggaamiyeyaasha dalxiiska ee dhinacyo badan u dagaallamayay 20 sano.
Alain St. Ange, madaxweynaha Guddiga Dalxiiska Afrika, iyo wasiirkii hore ee Dalxiiska oo ka yimid Seychelles wuxuu lahaa farriin midnimo Afrika.
Aleksandra Gardasevic Slavuljica, agaasimaha dalxiiska ee ummaddan Balkan -ka ayaa qayb ka ahaa WTN bilowgii. Waxaa laga dhigay geesiga dalxiiska doorkeeda ku aaddan isu keenidda gobolka Balkan. Waxaa taageeray Halyeeyga Dalxiiska Klodiana Gorica, Professor buuxa oo ka tirsan Jaamacadda Tirana, Kuliyadda Dhaqaalaha, Albania.
Ka maqal Dr. Snežana Štetić ayaa leh wuxuu ka shaqeynayay Dalxiiska iyo waxbarashada Dalxiiska in ka badan 40 sano waana madaxa kooxda xiisaha waxbarashada, oo lagu daray hogaaminta Kooxda heerka sare ee Balkan ee Shabakadda Dalxiiska Adduunka.
Deepak Joshi, geesi dalxiis oo ka socda Nepal, iyo Agaasimihii hore ee Guddiga Dalxiiska Nepal ayaa ka dhiibtay ra'yigiisa dib -u -furista dalxiiska ee gobolka Himalayan.
Professor Geoffrey Lipman oo ka tirsan SunX iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Cimilada iyo Dalxiiska (ICTP) xusuusiyey dunida halista isbadalka cimilada.
Geesi Dalxiis Mouhamed Faouzou DEME ka yimid Senegal wuxuu la wadaagay dhambaalkiisa rajada, kalsoonida, iyo dhiirri -gelinta adduunka dalxiiska. Sidoo kale waa safiirka Golaha Dalxiiska Afrika, iyo Lataliyaha Farsamada ee Wasiirka Dalxiiska iyo Gaadiidka Cirka ee Senegal.
Geesiga Dalxiiska iyo Maamulaha Guud ee Kooxda Xiga ee LLC gudaha Azerbaijan, Efsun Ahmadov, Baku, Azerbaijan dareemay fiicnaan kadib kiis aan la aqbali karin oo ah COVID.
Geesiga dalxiiska Diana McIntyre-Pike waxay siisay cusboonaysiin ku saabsan wadashaqaynteeda cusub ee ay la leedahay geesiga dalxiiska Edmund Bartlett, wasiirka dalxiiska ee Jamaica. Diana waa geesiga dalxiiska iyo hogaamiyaha dalxiiska bulshada ee Jamaica.
Amaka Amatokwu-Ndekwu, Lagos, Nigeria waa aasaasaha Ururka Haweenka Afrika ee Dalxiiska iyo Soo-dhoweynta ee dhowaan la aasaasay ee Nigeria. Waxay ku nooshahay Mareykanka iyo Nigeria labadaba.
Halyeeyga Dalxiiska Joseph Kafunda waa Guddoomiyaha Ururka Soo -saarka Dalxiiska ee Soo -ifbaxa iyo xubin ka ah Shabakadda Dalxiiska Adduunka ee fadhigeedu yahay Namibia. Wuxuu ka yimid Botswana.
Dr. Peter Tarlow oo ah aasaasaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa munaasabadda ku soo gabagabeeyay duco caqiido badan leh.
Marna ma jirto wax lacag ah oo lagu magacaabo ama lagu helo aqoonsiga Halyeeyada Shabakadda Dalxiiska Adduunka. Waxay qaadataa ugu yaraan laba magacaabid madax -bannaan si loogu tixgeliyo abaalmarintan. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan www.heroes.travel